musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Algeria Kuputsa Nhau » Algeria inoparadzanisa hukama hwehukama neMorocco
African Tourism Bhodhi • Algeria Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Marokero Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kuchekwa kwehukama pakati peAlgeria nehumambo hweMorocco kunoshanda kubva neChipiri asi vamiriri munyika yega yega vacharamba vakavhurika.
Algeria inodimbura hukama hwehukama nehumambo hweMorocco.
Kudyidzana kwekudyidzana pakati peAlgeria neMorocco kuri kuitika ipapo ipapo.
Algeria neMorocco zvakave nekukanganisa hukama kwemakumi emakore.
Gurukota rezvekunze muAlgeria, Ramdane Lamamra vazivisa nhasi kuti nyika iri kucheka hukama hwehukama nehumambo hweMorocco.
"Algeria yasarudza kudimbura hukama hwehukama nehumambo hweMorocco kubva nhasi," Lamamra akadaro kumusangano wenhau neChipiri, achiwedzera kuti hukama hwehukama hwacho hwakakonzerwa neyakaitwa nenyika yevavakidzani.
"Humambo hweMoroccan hahuna kumbomisa zviito zvavo zvehutsinye kuAlgeria," akadaro gurukota.
Gurukota iri rakadudzawo rutsigiro rweMorocco rwevamiriri vevatariri kuIsrael muAfrican Union semumwe wevanopa danho.
Arujeriya uye Moroko anga akanganisa hukama kwemakumi emakore, kunyanya pamusoro penyaya yeWestern Sahara.
Kuchekwa kwehukama hwehukama kunoshanda kubva neChipiri asi vamiriri munyika yega yega vacharamba vakavhurika, akadaro Lamamra.
Gurukota rezvekunze kweMorocco harina kutaura nekukurumidza nezve budiriro iyi.
King Mohammed VI weMorocco akadaidzira hukama hwakanaka neAlgeria.
Algeria svondo rapfuura yakati moto unouraya waive mabasa emapoka aakatumidza kuti "magandanga", rimwe rawo rakati rakatsigirwa neMorocco.
Masango anopisa muAlgeria, ayo akaputika muna Nyamavhuvhu 9 pakati pemvura inopisa inopisa, akapisa makumi ezviuru emahekita esango uye akauraya vanhu vangangoita makumi mapfumbamwe, kusanganisira vanopfuura varwi makumi matatu.
Vakuru veAgeria vakanongedzera chigunwe chemoto parusununguko rwenzvimbo yedunhu reBerber reKabylie, iro rinotenderera nemhenderekedzo yeMediterranean kumabvazuva kweguta guru, Algiers.
Vakuru vakapomerawo Movement for Kuzvisarudzira kweKabylie (MAK) yekupinda munziyo yemurume akapomedzerwa mhosva yekupisa, chiitiko chakakonzera kutsamwa.